Nihemotra i Japan Eo Amin’ny Filaharana Ankapoben’ny Fahalalahan-Gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Febroary 2014 9:30 GMT
Filaharan'ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety araka ny @RSF_RWB Agence France-Presse (@AFP)
Mbola nidina ihany ny laharana nametrahan'ny Reporters Sans Frontières an'i Japan tamin'ity taona 2014 ity eo amin'ny Fahalalahan'ny Fanaovan-gazety izay nitontona any amin'ny laharana faha-59 amin'ny 180. Navoitran'ny tatitra isan-taona fa ny tolo-dalàna avy amin'ny governemanta Japoney momba ny tsiambaratelom-panjakana izay nolaniana tamin'ny desambra tamin'ny herintaona no nahatonga izany:
Ny “tolo-dalàna fiarovana ny fitsikilovana manokana” nolanian'ny Diet Nasionaly (naotin'ny mpandika: mitovy amin'ny antenimieram-pirenena ihany) (faha-59, – 5) tao Japana tamin'ny faran'ny taona 2013 no hampihena ny fangaraharan'ny asan'ny governemanta amin'ny raharaham-pirenena lehibe tahaka ny angovo nokleary sy ny fifandraisana amin'i Etazonia ho lasa fady tsy azo resahina. Lasa ataon'ny mpanao lalàna sorona avokoa ny fanaovan-gazety famotopotorana, ny tombontsoam-bahoaka ary ny fahazoana tsy miteny ny loharanom-baovaon'ny mpanao gazety noho ny fitiavana tsy hielezan'ny vaovao mety hanahirana.
Nasongadin'ny fampilaharana ihany koa ny fanavakavakana mahazo ny mpanangom-baovao vahiny sy mandeha amin'ny anaran'ny tenany rehefa eo amin'ny fahazoana miditra amin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety na eo amin'ny fahazoana vaovao.
Amin'ny ankapobeny dia tsy heverin'ny Japoney ho zo ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety satria mifikitra amin'ny fandraisana ny vaovao avy amin'ny gazety be mpanaraka fotsiny ny ankamaroan'ny olona. Saingy, noho ny fitohizan'ny fitsontsoriky ny laharan'ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety manerantany (nidina avy amin'ny laharana faha-22 nankany amin'ny laharana faha-53 i Japana tamin'ny 2013) sy ny nisian'ny fotoana mitati-baovao manao fanasana ati-doha amin'ny voina nokleary tao Fukushima, dia efa manomboka mijery am-pitsikerana amin'ny fahalalahan-gazety ao Japana ny olona.
Mpanao gazety mahaleotena Ryusaku Tanaka namaly ny vaovao tao amin'ny Twitter:
Mitana ny faha-59 eo amin'ny filaharana ankapoben'ny Fahalalahan-gazety i Japana? Tsy gazety ampanginin'ny fanjakana anterisetra tahaka ny any Shina na any Rosia io. Manana fahefana betsaka ny gazety be mpamaky Japoney. Manana ny fahalalahana ny hitabataba izy, sy izay tiany, ary amin'ny tombontsoany ho azy manokana. Tsy azo lazaina aza ve, fa ny azy no tsara indrindra amin'ny ny haavon'ny fahalalahana ananan'ny fampitam-baovao?
Mpisera Twitter hafa, Daisuke Murakami, naneho hevitra tamin'ny fahadisoam-panantenana:
Tsy zavatra vao haingana io fitsontsoriky ny fampitam-baovao be mpanaraka io, fa ankehitriny izy no manakaiky ny fetran'ny antsoina hoe “marary”. Mahita kokoa isika izao hoe fanangonana sy fitateram-baovao tahaka ny ahoana moa no hitantsika olon-tsotra isan'andro. Raha lazaina tsy ankivilivily dia tsy mampino kokoa noho ny mpanao politika ny gazety.
Navoitran'ny [ja] mpisera “soret” ao amin'ny tranonkalam-pamandrihana ara-tsosialy hatena fa nandray anjara tamin'ny nahatonga io olana io ny kisha club, rafi-pikambanan'ny gazety mahazatra ao Japana:
Mety ho avy amin'ny fahadisoana fisian'ny kisha club no nahatonga ny laharana ambany. Ary ny tsy filazana na inona na inona momba izany, fa maka fotsiny ny tantaran'ny loza nokleary sy ny lalànan'ny tsiambaratelom-panjakana, dia lasa mihavery hatrany hatrany ny fitokisana an-dry zareo.
Hajian-tsary avy amin'i Dick Thomas Johnson amin'ny alalan'ny Flickr (CC-BY-2.0)
Ny tsonga dia nadikan'i Taylor Cazella